UJuan Francisco Ferrándiz. Udliwano-ndlebe nombhali weSilingo saManzi | Uncwadi lwangoku
Ukufota: UJuan Francisco Ferrándiz, iprofayili ye-Twitter.
UJuan Francisco Ferrándiz Ungumbhali wenoveli yembali enezihloko ezifana nezi Iiyure ezimnyama, Idangatye lobulumko okanye Umhlaba oqalekisiweyo. NgoMatshi walo nyaka uphehlelele eyokugqibela, Umgwebo wamanzi. Ndilibulela kakhulu ixesha kunye nobubele bokundinika oku udliwano ndlebe, apho athetha ngaye nangeminye imixholo emininzi.
UJuan Francisco Ferrándiz. Udliwano-ndlebe
UNCWADI NGOKU: Incwadana yakho yamva inesihloko Umgwebo wamanzi. Usixelela ntoni ngayo kwaye yavela phi le mbono?
UJUAN FRANCISCO FERRÁNDIZ: El isigwebo samanzi akhawunti ubomi bomfama wenkulungwane ye-XNUMX esiya kuthi ngayo sazi inxalenye engapapashwanga kodwa esisiseko sembali yethu. Phakathi kwe-adventures kunye neemfihlo siya kusondela ekufumaneni okumangalisayo: ubulungisa obutsha kwababuthathaka kunye umbungu wamalungelo oluntu. Yinyaniso encinane eyaziwayo yembali eyatshintsha ihlabathi.
Nangona ezi nyaniso zazifundwe kwinqanaba lomthetho, yayinjalo ukufunda inqaku kumaLungelo oLuntu xa ndisiva amandla ayo. Kwaqala ngale ndlela konke.
I-JFF: Ndikhumbula inoveli yam yokuqala kakuhle, yayinjalo ISandokannguEmilio Isalgari. Ndandisengumntwana kwaye le ncwadi ndayifumana kwithala leencwadi likamasipala wedolophu yam, iCocentaina. Imbali ndiye ndafakwa (Yayiyiloo nto yokuqala etyumza umfundi), kodwa xa sifika kumqulu wesithathu kwavela ukuba ibibolekiwe. Bendisiya phantse yonke imihla ndiyojonga ukuba sebeyibuyisile na kodwa hayi. Ngenye imini, umphathi wethala leencwadi, ekubona ukuphoxeka kwam, wacebisa ukuba ndifunde enye incwadi ngoxa ndandilindile. Emva koko wancomela enye kunye nenye ... Ukususela ngoko andizange ndiyeke ukufunda nangona ndihlala ndilindele ukuba inxalenye yesithathu yeSanokán ibuyiswe.
AL: Kwaye umbhali oyintloko?
I-JFF: Lo mbuzo uhlala ubuzwa kum kwaye ndifumana kunzima ukuwuphendula. Ngokwenene Andinaye umbhali oyintlokoEwe, into endiyinqwenelayo ngamabali esinokuwenza. Imida yeengcinga zethu.
Ukusuka Tolkien to Reverte, Pardo Bazán, Vázquez Figueroa, Asimov, Dumas, Umberto Eco, Conrad, Ursula K. Le Guin... Njengoko ubona ukuba i i-algam yexesha kunye nezimboEwe, yindlela endithanda ngayo ukuphonononga ihlabathi loncwadi, ngaphandle kweelebhile, ukuhamba kwiintlobo ezahlukeneyo kunye nababhali.
I-JFF: Ngokuqinisekileyo kuya UWilliam waseBaskerville de Igama le rose. Umele njengaye nawuphi na omnye i-archetype yomcebisi; indoda elumkileyo ekhokelayo kunye ne-orients (kungekhona abanye abalinganiswa, kodwa kunye nomfundi). Ungoyena mlinganiswa undenza umdla kakhulu ngenxa yesakhono sokutyebisa ibali.
I-JFF: Oko ndenza ikhosi yokuchwetheza ndisengumntwana Bendithanda ukuchwetheza ngaphezu kokubhala ngesandlaYiyo loo nto ndihlala ndibhala ngekhompyuter. Mhlawumbi eyona mania kukuba xa ubhala iinoveli ndiyayithanda loo nto Okubhaliweyo kwikhusi kuyafana nokubhaliweyo okupapashiweyo, oko kukuthi, ngokuhambelana kwayo, imida, imigca emide yeengxoxo, ifonti, izithuba, njl.
I-JFF: Ndikhoyo isikhova kwaye ukuba ndiyakwazi ndikhetha ukubhala ebusuku. Ndinekona yam kwenye eluphahleni ukusuka ekhaya kwaye uhlala ugcina zombini umkhwa kunye nendawo yokusebenza. Kodwa ngamava am ndiza kukuxelela ukuba xa kukho inkuthazo ungabhala kwigaraji emnyama kwaye uhleli kwisitulo seplastiki. Kwelinye icala, ukuba akukho nanye okanye uvaliwe, usenokuba sele ukwindlwane ebalaseleyo yamaxhalanga kwiintaba zaseSwitzerland; akuphumi neleta.
I-JFF: Kuba into endinomdla kuyo ngamabali, ndiyathanda ukuba enzeka kuwo ngamaxesha ahlukeneyo nangeendlela ezahlukeneyo (ingaba kwinqaba yamaxesha aphakathi, kwiMadrid yanamhlanje okanye esithubeni). Injini yobomi bam inomdla kwaye ukuba umbhali uyakwazi ukuyivusa kum, uhambo, naphi na apho lunokuba lukhona, luya kuba mnandi.
Kwakhona, njengaye nawuphi na umbhali, kufuneka wahlule ixesha lokufunda ukuze ubhale ngokwakho, ngezincoko, amanqaku, njl. Ngamanye amaxesha iba ngumsebenzi onika umdla wabacuphi.
I-JFF: Ndisandula ukugqiba inoveli yamabali esayensi Ukufumana, de CarterDamon kwaye ndiqale ngomdla omkhulu Umrhwebi wencwadi de ULuis Zueco. Njengoko ubona, utshintsho lwesini luyamangalisa. Ndinalo umdla kakhulu assayo malunga nobugcisa bexesha eliphakathi elinesihloko Imifanekiso eshiyiweyo nguAlejandro García Avilés, ukufunyanwa kokwenyani ukuqonda enye yezinto endizithandayo: sebenzisa ingqondo ukuze ukwazi ukubona umhlaba njengoko umntu wamaxesha aphakathi ebenokwenza.
Ngokuphathelele amabali aphuphumayo entlokweni yam, iinkungu azikacaci kwaye Andikwazi ukulindela nantoni na kwinoveli yam elandelayo. Ndiyathemba ukuba ndingakuxelela kungekudala.
I-JFF: Ngaphandle kwamathandabuzo sigcwele ngokupheleleyo inkqubo yenguqu kunye nokutshintsha kweparadigm. Ukongeza kwincwadi yedijithali, ezinye iindlela zokuzonwabisa zifikile ezabelana nge-niche efanayo nokufunda, ndibhekisela kwiintanethi zentlalo kunye namaqonga okusasaza.
Indlela abasabela ngayo abavakalisi ibe kukwandisa uncwadi olunikelwayo yaye nyanga nganye kuphuma amakhulu eencwadi ezintsha, uninzi lwazo zisasazwa kancinane ukuze kuphetshwe ilahleko. Oku kuthi ababhali abaninzi banethuba lokupapasha, kodwa uhambo lwencwadi lufutshane kakhulu, iiveki nje ezimbalwa okanye iinyanga ezimbalwa, kwaye umphumo udla ngokuba mbi.
Kwelinye icala, indlela yokusondela kumfundi ayisiyiyo incwadi eboniswe kwiivenkile ezithengisa iincwadi kodwa kukuvezwa kombhali kuthungelwano. Ndicinga ukuba impumelelo igxile kubabhali ngobukho obukhulu beendaba.
Konke oku akukho ngcono okanye kubi kakhulu, lutshintsho. Imbali igcwele utshintsho, kwinqanaba elincinci okanye elikhulu, elimele ingxaki kwabanye kunye nethuba kwabanye.
I-JFF: Njengaye wonke umntu, ndaziva ndinoluvo lokuba loo nyani iyashenxa kwaye enye iphumelele. Ndikhumbula ukuba ekuqaleni wandixelela ukuba "ayiyi kwenzeka" okanye "asiyi kufika kuloo nto", kwaye kuya kwenzeka. Ukuvalelwa, izitrato ezingenanto, inani lokufa… Xa ucinga ngayo, yomelele.
Ndiyitolika into eyenzekileyo njenge Idrama yembali yayihlala kumntu wokuqala, kodwa ndiyavuma ukuba ndishiywe yimvakalelo engathandekiyo. Andazi ukuba sizakuthatha ithuba lokuvuka kwesi sijikelezi-langa sitshintshe. Namhlanje kuyimfashini ukugweba ixesha elidlulileyo kunye nezinga lethu langoku lamaxabiso kunye nekratshi elikhulu. Ndithe nqa, Baya kusigweba njani kwixesha elizayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » UJuan Francisco Ferrándiz. Udliwanondlebe nombhali wovavanyo lwaManzi